आज अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनः आगामी चार बर्षसम्मका लागि कस्ले मार्ला बाजी ? के बाइडनलाई ट्रम्पले पराजित गर्लान ?
इलेक्टोरल कलेज निर्वाचक मण्डलको मत महत्वपूर्ण हुने
प्रकासित मिति : २०७७ कार्तिक १८, मंगलवार प्रकासित समय : १०:०४
अमेरिका । आगामी चार वर्षको कार्यकालका लागि आज अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुदैंछ । सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट हिलरी क्लिन्टनलाई पछिपार्दै डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
आज हुने राष्ट्रपतिय निर्वाचले अमेरिकाले आगामी सन् २०२४ सम्मका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नेछ । राष्ट्रपतिको चुनावी प्रतिस्पर्धामा अहिले विशेषगरी दुईवटा पार्टीको चर्चा बढी रहेको छ ।
अमेरिका र विदेशमा रहेका धेरै मानिसको जीवनमा त्यहाँ हुन लागेको निर्वाचनको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव रहने गरेको छ । यतिबेला उक्त निर्वाचनका मुख्य दुई उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा प्रचार, छलफलहरु समेत बाक्लिएका छन ।
राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा रिपब्लिकन अमेरिकाका परम्परावादी राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवार पदासीन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र डेमोक्र्याटहरू अमेरिकाको उदारवादी राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडन प्रतिस्पर्धा गर्दैछन ।
उनीहरु आगामी चार वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन चाहन्छन्। राष्ट्रपति पदका ती दुवै पुरुष उम्मेदवार उमेरले ७० वर्षभन्दा माथिका छन्। ट्रम्प ७४ वर्ष पुग्नै लागे भने बाइडन ७८ वर्षका भए।
अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका दुवै उम्मेदवारले सबैभन्दा धेरै इलेक्टोरल कलेज भनिने निर्वाचक मण्डलको सबैभन्दा बढी मत ल्याउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
अमेरिकाको प्रत्येक राज्यको हकमा निश्चित सङ्ख्यामा इलेक्टोरल कलेज मत निर्धारण गरिएको छ, जुन केही हदसम्म राज्यहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा तोकिएको हुन्छ।
जम्मा ५३८ वटा इलेक्टोरल कलेज मत उपलब्ध छ। जुन उम्मेदवारले २७० भन्दा बढी त्यस्तो मत प्राप्त गर्न सक्छ उही विजयी ठहरिन्छ। यसको अर्थ सामान्य मतदाताले राज्यस्तरीय प्रतिस्पर्धाका लागि मतदान गर्ने गर्छन् राष्ट्रियस्तरमा होइन।
त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमा वा देशव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उम्मेदवार पनि इलेक्टोरल कलेजले गर्ने मतदानमा पराजित हुनसक्छन भन्ने गरिएको पाइन्छ ।
सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा यस्तै भएको थियो। देशभरि भएको कुल मतदानमा हिलरी क्लिन्टनले पाएको कुल मत धेरै थियो तर इलेक्टोरल कलेज वा निर्वाचक मण्डलमा धेरै मत पाएका डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएका थिए।
अमेरिकामा दुईवटालाई छाडेर बाँकी सबै राज्यमा जो जित्यो त्यहाँको सबै इलेक्टोरल कलेज मत उसैको हुने प्रावधान छ।
यस हिसाबले धेरैजसो राज्यहरू दुईमध्ये एक पार्टीको पक्षमा राम्रैसँग ढल्केको पाउन सकिन्छ। त्यसैले यसरी मतदाताको झुकावमा स्पष्टता नदेखिएका एक दर्जनजति राज्यमा नै चुनाव प्रचारप्रसार धेरै जसो केन्द्रित हुने गर्छ।
यो निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको पतिप्रर्धामा ट्रम्प र बाइडनमात्रै देखिए पनि मतदाताहरूले कङ्ग्रेस भनिने अमेरिकी संसदको सदस्यका लागि पनि मतदान गर्छन्। तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेटेन्टिभ्स मा डेमोक्र्याटहरूको पहिले नै बहुमत रहेको छ र तिनीहरू त्यस्तो बहुमत कायमै राखेर माथिल्लो सदन सिनेटमा आफ्नो कब्जा जमाउन चाहन्छन्।
संसद्को दुवै सदनमा बहुमत हासिल भएमा तिनीहरूले यदि डोनल्ड ट्रम्प पुनः निर्वाचित हुन पुगेको खण्डमा उनका योजनाहरूलाई ढिलो पारिदिने वा रोक्ने गर्न सक्छन्। यो वर्ष हाउसमा सबै ४३५ स्थानका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने सिनेटको ३३ स्थानका लागि पनि मतदान हुनेछ।
श्रोतका अनुसार आजको निर्वाचनको परिणाम आउन केही दिन लाग्ने बुझिएको छ । मतदानका बेला खसेको प्रत्येक मत गन्नका लागि केही दिनको समय लाग्ने भएपनि मतदान सकिएको भोलिपल्ट बिहान सबेरै नै को विजयी भयो भनेर लगभग स्पष्ट भइसक्ने जानकारहरु बताउँछन ।
सन् २०१६ मा मतगणना भइरहँदा बिहानको ३ बजे नै डोनल्ड ट्रम्पले न्यूयोर्कको मञ्चबाट हर्षित समर्थकहरूको भिडलाई विजयी भावमा सम्बोधन गरेका थिए। तर अमेरिकी निर्वाचन अधिकारीहरूले यस पटक त्यस्तो अवस्था नहुन सक्ने भन्दै हुलाकबाट मतदान गर्नेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएकोले अन्तिम मतपरिणामका लागि केही दिन वा केही हप्ता समेत लाग्न सक्ने बताइरहेका छन्।
मतदान सकिएको केही घण्टाभित्रै परिणाम थाहा हुन नसकेको पछिल्लो अवस्था सन् २००० मा देखिएको थियो। त्यस बेला मतदानको एक महिनापछि भएको देशको सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् मात्रै निर्वाचनको विजेता निर्धारण हुन सकेको थियो।
नयाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा ज्यानुअरी २० तारिखमा इनग्यूरेशन भनिने समारोहमा पदको शपथ ग्रहण गर्ने गर्छन्।त्यस्तो समारोह राजधानी वाशिङ्टन डीसीस्थित क्यापिटल भनिन सङ्घीय संसद् भवनबाहिरको विशाल भर्‍याङका खुड्किलाहरूमा हुने गर्छ।
उक्त समारोहपछि नयाँ राष्ट्रपति आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल आरम्भ गर्न औपचारिक कार्यालय र निवास ह्वाइट हाउसतर्फ लाग्छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको लागि अर्को निर्वाचन सन् २०२४ मा हुनेछ । (विभिन्न श्रोतबाट लिइएको..)